Isiketi kunye neebhutsi eziphezulu, i-tandem efanelekileyo ebusika | Bezzia
UMaria vazquez | 10/01/2022 18:00 | Ndinxiba ntoni
Kwiminyaka embalwa edlulileyo eBezzia sele siyicebisile le tandem esebenza kakuhle ebusika. Emva koko indibaniselwano ye isiketi kunye neebhutsi eziphezulu Yayiyenye yeendlela eziphambili zexesha lonyaka kwaye nangona kulo nyaka singenako ukuyichaza ngolo hlobo, iseyeyona ndlela ilungileyo.
Iibhutsi ezinde zisebenza ngakumbi kulo nyaka ngeentlobo ezimbini zeziketi: Iingubo ezimfutshane, eziphakamileyo eziphezulu kunye neengubo ezide zingamkela ezi zicucu kunye nemiqulu eyahlukeneyo, njengoko unokubona kwimifanekiso esiyikhethile ukuba ikukhuthaze.
1 Ngeengubo ezimfutshane
2 Iziketi ezinde
Iziketi ezincinci okanye iibhulukhwe ezimfutshane ziba yindlela yokuqala yokunxiba le tandem edumileyo kobu busika. Ungabheja iziketi eziphothiweyo zangaphambili iphefumlelwe ngeminyaka yamashumi asixhenxe. Kodwa nakweminye i-sober ngakumbi kwimibala engathathi hlangothi.
Dibanisa kunye ne ipoloneck kwiitoni ezingathathi hlangothi ezingebi i-spotlight kunye neebhutsi eziphezulu ezimnyama okanye ezimdaka. Ungalibali iikawusi, kokukhona kwendalo kungcono. Kwaye ukulwa nokubanda, ukubheja kwidyasi ende njengoTiffany, okubonakala ngathi kusenze sathandana.
Phakathi kwee-skirts ezide akukho mkhwa onjalo ocacileyo kwaye uluhlu lwamathuba luyanda. I iziketi ezivuthayo kumalaphu oboya bamele iklasikhi kwaye ihlala intle enye indlela. Bet ngathi Zina kwisiketi ngeethoni ezifudumeleyo kunye nejezi kunye neebhutsi ezimnyama ukuba ufuna ukuyidlala ekhuselekileyo.
Los iiseti ze-monochrome I-Skirt kunye nejezi edibeneyo yenye enye indlela enhle. Kule minyaka yangoku iiseti ezinithiweyo baye bazuza udumo olukhulu, ngakumbi abo benzelwe ukusinika intuthuzelo enkulu.
Kodwa xa sibuyela kwisiketi se-tandem kunye neebhutsi eziphakamileyo, asifuni ukuphela ngaphandle kokuthetha ngeenkangeleko ezimbini ezahlukeneyo eziye zasiqinisekisa nge-100%: I-Ellen, yenziwe ngesiketi esimnyama esimnyama kunye needyasi ezinetoni kunye neebhutsi esinokuthi sizenze. hlela njenge yangoku kwaye nengqondo; kunye ne-Rocky's, equka isiketi esinepateni evuyayo, ijezi ephothiweyo kumbala ofanayo kunye neebhutsi ezichaseneyo.
Imifanekiso - @iqosweb, @iamfanlalisa, @yezisentaris, @iamfanlalisa, @iqosweb, @jennymwalton, @iamfanlalisa, @iqosweb, @lungelo_lukalo
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » fashion » Ndinxiba ntoni » I-Skirt kunye neebhutsi eziphezulu, ukudibanisa okupheleleyo ebusika